ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ ရဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဘဝ ကုနျဆုံးတော့မှာလား….? – Premier League Special
ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ ရဲ့ ယူနိုကျတကျ ကစားသမားဘဝ ကုနျဆုံးတော့မှာလား….?
December 27, 2020 yeminn Article 0
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျရဲ့ တောငျပံ ကစားသမား ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈကို ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ချေါယူဖို့ ပရီးမီးယားလိဂျ ကလပျ ( ၄ ) သငျးက ပွငျဆငျနကွေောငျး သိရပါတယျ။
လိဒျ နှငျ့ ဘနျလေ အသငျးတို့က ဂြိမျးဈကို ချေါယူဖို့ ဦးစှာ စိတျဝငျစားခဲ့ကွပွီး Sun Sport ရဲ့ လလေ့ာခကျြအရ ဘရိုကျတနျအသငျးကပါ စိတျဝငျစားနကွေောငျး သိရပါတယျ။ ယခုအခါ ဝကျဈဘရှနျး အသငျးကပါ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူးကို အငှားချေါယူလိုတဲ့ အသငျးတှထေဲ ပါဝငျလာတာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၉ခုနှဈက ဆှမျဆီးအသငျးကနေ ယူနိုကျတကျကိုရောကျ လာခြိနျက ပှဲထှကျခှငျ့မြားစှာရရှိခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျပရိသတျတှသေဘောကနြှဈခွိုကျခဲ့ကွပမေယျ့ သူ့ရဲ့ခွစှေမျးဟာ နောကျပိုငျးအခြိနျတှမှော အသငျးရဲ့ကစားကှကျကိုပံ့ပိုးပေးနိုငျစှမျးကဆြငျးလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီနှဈဘောလုံးရာသီမှာ ဂြိမျးဈဟာ ယူနိုကျတကျရဲ့ ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့မရရှိခဲ့တဲ့ပှဲစဉျတှဟော အတျောကိုမြားလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ ပရီမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး ( ၂ ) ပှဲဆကျ ပှဲထှကျ ကစားသမားအဖွဈ ပွနျလညျ ပါဝငျခှငျ့ရနပေါတယျ။
အသကျ ( ၂၃ ) နှဈအရှယျ ကစားသမားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျက လိဒျအသငျးကို ၆ဂိုး – ၂ ဂိုး အနိုငျ ခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာ ယူနိုကတကျရဲ့ နောကျဆုံးဂိုးကို သှငျးယူပေးခဲ့ပွီး လကျစတာအသငျးနဲ့ တဈဖကျ ( ၂ ) ဂိုး စီ သရကေခြဲ့တဲ့ ပှဲစဉျမှာလညျး ( ၅၄ ) မိနဈထိ ပါဝငျကစားသှားခဲ့တယျ။
Daily Star ရဲ့သတငျးတှေ အရ ဝကျဈဘရှနျးနညျးပွ ဆမျအလာဒှိုငျးက ဇနျနဝါရီလမှာ ဂြိမျးကို အငှားခပြေးဖို့ ယူနိုကျတကျထံ တောငျးဆိုခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
ဂြိမျးဈရဲ့ ဆှမျဆီးနညျးပွဟောငျး ဂရဟေမျ ပျေါတာကလညျး ဘရိုကျတနျအသငျးအတှကျ တိုကျစဈအငျအားဖွညျ့ဖို့ ဂြိမျးဈကို ချေါယူလိုနကွေောငျး သိရပါတယျ။ လိဒျအသငျးကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ အပွောငျးအရှမှေ့ာ ဂြိမျးဈကို ချေါယူဖို့ ကွိုးစားခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဂြိမျးဈအနနေဲ့ အိုးထရကျဖို့ဒျ ပထမရာသီမှာ ပုံမှနျ ပှဲထှကျခှငျ့ရခဲ့ပွီး ( ၄၆ ) ပှဲထိ ကစားပေးခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ယခုနှဈဘောလုံးရာသီမှာတော့ အောကျတိုဘာလ ( ၂၄ ) ကတညျးက ပှဲကစားခှငျ့ ပြောကျဆုံးနခေဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့အပတျ လိဒျနဲ့ပှဲ ကမှ ပွနျလညျ ပှဲထှကျ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
တောငျပံကစားသမား ဂြိမျးဈအနနေဲ့ အကယျဒမီထှကျကစားသမား ဂရငျးဝုဒျ ရှိနတေဲ့အတှကျ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ ရုနျးကနျရဖှယျ ရှိနတေဲ့အပွငျ ဂကျြဆီလငျဂတျကလညျး အသငျးနဲ့ သကျတမျးတိုးသှားမယျ့ အလားအလာလညျးရှိနပွေီး မာရှယျကိုလညျး တဈခြို့ပှဲတှမှော တောငျပံကစားသမားအဖွဈ ကစားစခေဲ့တာကွောငျ့ သူ့ရဲ့ခွစှေမျးပွနိုငျမှုဟာ ပွေးအားသာရှိပွီး ပုံမှနျခွစှေမျးသာပွသနိုငျနအေုံးမယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့ယူနိုကျတကျကစားသမားဘဝဟာ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ အခြိနျကုနျဆုံးသှားနိုငျပါတယျ။
ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ယူနိုက်တက် ကစားသမားဘဝ ကုန်ဆုံးတော့မှာလား….?
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ်ကို ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ ခေါ်ယူဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ် ( ၄ ) သင်းက ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
လိဒ် နှင့် ဘန်လေ အသင်းတို့က ဂျိမ်းစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ဦးစွာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပြီး Sun Sport ရဲ့ လေ့လာချက်အရ ဘရိုက်တန်အသင်းကပါ စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခုအခါ ဝက်စ်ဘရွန်း အသင်းကပါ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးကို အငှားခေါ်ယူလိုတဲ့ အသင်းတွေထဲ ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်က ဆွမ်ဆီးအသင်းကနေ ယူနိုက်တက်ကိုရောက် လာချိန်က ပွဲထွက်ခွင့်များစွာရရှိခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေသဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြပေမယ့် သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းဟာ နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်စွမ်းကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာ ဂျိမ်းစ်ဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေဟာ အတော်ကိုများလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပရီမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး ( ၂ ) ပွဲဆက် ပွဲထွက် ကစားသမားအဖြစ် ပြန်လည် ပါဝင်ခွင့်ရနေပါတယ်။
အသက် ( ၂၃ ) နှစ်အရွယ် ကစားသမားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က လိဒ်အသင်းကို ၆ဂိုး – ၂ ဂိုး အနိုင် ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ယူနိုကတက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး လက်စတာအသင်းနဲ့ တစ်ဖက် ( ၂ ) ဂိုး စီ သရေကျခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း ( ၅၄ ) မိနစ်ထိ ပါဝင်ကစားသွားခဲ့တယ်။ Daily Star ရဲ့သတင်းတွေ အရ ဝက်စ်ဘရွန်းနည်းပြ ဆမ်အလာဒွိုင်းက ဇန်နဝါရီလမှာ ဂျိမ်းကို အငှားချပေးဖို့ ယူနိုက်တက်ထံ တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ရဲ့ ဆွမ်ဆီးနည်းပြဟောင်း ဂရေဟမ် ပေါ်တာကလည်း ဘရိုက်တန်အသင်းအတွက် တိုက်စစ်အင်အားဖြည့်ဖို့ ဂျိမ်းစ်ကို ခေါ်ယူလိုနေကြောင်း သိရပါတယ်။ လိဒ်အသင်းကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်းအရွေ့မှာ ဂျိမ်းစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်အနေနဲ့ အိုးထရက်ဖို့ဒ် ပထမရာသီမှာ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး ( ၄၆ ) ပွဲထိ ကစားပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာတော့ အောက်တိုဘာလ ( ၂၄ ) ကတည်းက ပွဲကစားခွင့် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် လိဒ်နဲ့ပွဲ ကမှ ပြန်လည် ပွဲထွက် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပံကစားသမား ဂျိမ်းစ်အနေနဲ့ အကယ်ဒမီထွက်ကစားသမား ဂရင်းဝုဒ် ရှိနေတဲ့အတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်ရဖွယ် ရှိနေတဲ့အပြင် ဂျက်ဆီလင်ဂတ်ကလည်း အသင်းနဲ့ သက်တမ်းတိုးသွားမယ့် အလားအလာလည်းရှိနေပြီး မာရှယ်ကိုလည်း တစ်ချို့ပွဲတွေမှာ တောင်ပံကစားသမားအဖြစ် ကစားစေခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်မှုဟာ ပြေးအားသာရှိပြီး ပုံမှန်ခြေစွမ်းသာပြသနိုင်နေအုံးမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝဟာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ အချိန်ကုန်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈကို မတူညီတဲ့နရောကနေ ပွောငျးလဲစခေဲ့တဲ့ ကစားသမားအား ဖှငျ့ဟခဲ့တဲ့ ရကျရျှဖို့ဒျ
တဈနှဈစာခြုပျသဈ သဘောတူပွီး ရီးရဲလျရဲ့ ၄ ဦးမွောကျ အသကျအကွီးဆုံး ကစားသမားဖွဈလာမယျ့ မိုဒရဈ